कोरोना भाइरस नेपालः के कोभिड-१९ का बिरामीमा प्लाज्मा थेरापी प्रभावकारी देखिएको हो ? - DURBAR TIMES
HomePoliticsकोरोना भाइरस नेपालः के कोभिड-१९ का बिरामीमा प्लाज्मा थेरापी प्रभावकारी देखिएको हो...
भाइरोलोजिस्ट डा. लुना भट्ट शर्माका अनुसार कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी एक प्रकारको ‘प्यासिभ एन्टीबडी थेरापी’ हो
“प्यासिभ एन्टीबडी थेरापी भनेको एक व्यक्तिमा बनिसकेको एन्टीबडी अर्को व्यक्तिलाई दिनु हो। अरू रोगमा पनि तत्काल उपचार गर्ने क्रममा यो विधि अपनाइन्छ।”
“सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा रगत दिइने जस्तै हो,” उनी थप्छन्।
“हामीले उपचार गरेकामध्ये दुईजना निको भएर घर गइसक्नुभएको छ भने एकजना अझै उपचाररत हुनुहुन्छ,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।
“कतिपय मान्छेले दाता जुटाइदिन मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्नुभएको छ भने कतिपयले हाम्रो टोलीलाई सम्पर्क गर्ने गर्नुभएको छ।”
“मलाई नै एक दिनमा १२-१५ वटा आग्रह आइरहेको हुन्छ। दाताहरूबारे विवरण खोज्न नै गाह्रो भइरहेको छ।”
“यसमा राज्यकै निकायले शुरू गरिदिए सहज हुन्थ्यो। रेडक्रसजस्ता संस्थाले पनि पहलकदमी लिइदिए हुन्थ्यो। कोभिड-१९ का सयजना गम्भीर बिरामीमध्ये १० जनालाई पनि यो विधिबाट बचाउन सकियो भने राम्रै हुन्छ नि,”उनले थपे।
“अहिलेसम्म १५-१६ जनाको उपचार भएको छ। कम्तीमा ३० जना पुगेपछि हामीले विश्लेषण गर्ने भनेका छौँ। त्यसपछि केही भन्न सकिन्छ कि?,” ज्ञवालीले भने।
प्रभावकारिताबारे अहिले नै निष्कर्ष दिन नसकिने बताउँदै उनले भनिन्, “कुनैकुनै एन्टीबडी ‘एन्टीबडी डिपेन्डेट एन्ह्यान्समेन्ट’ अर्थात् भाइरसलाई न्युट्रालाइज नगरी उल्टै अर्को कोषभित्र छिराउन मद्दत गर्ने हुन्छ।”
“तर खोपको विकास भइनसकेको अवस्था र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको उपचारमा अन्य औषधिहरूको प्रयोगलाई हेर्दा यसको राम्रै नतिजा देखिएको छ,” उनी थप्छन्।
Previous articleआलितालमा वन फँडानी
Next articleहत्याको आरोपमा दुई पक्राउ